၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသားတွေ NLD ပါတီကို ထောက်ခံအားပေးနေတာလို့ ဆိုထားတဲ့ သတင်းမှားပျံ့နှံ့ | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
This photo taken on December 18, 2018 showsaMyanmar man logging into his Facebook account atateashop in Yangon. - Facebook has removed hundreds of additional pages and accounts in Myanmar with hidden links to the military, the platform said on December 19, as the company scrambles to respond to criticism over failures to control hate speech and misinformation. (Photo by Sai Aung MAIN / AFP) (AFP / Sai Aung Main)
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသားတွေ NLD ပါတီကို ထောက်ခံအားပေးနေတာလို့ ဆိုထားတဲ့ သတင်းမှားပျံ့နှံ့
AFP မြန်မာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ တနင်္လာ5အောက်တိုဘာလ 2020 အချိန် 00:03နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်သည့်နေ့စွဲ တနင်္လာ5အောက်တိုဘာလ 2020 အချိန် 12:01
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအာဏာရပါတီ (NLD) ကို ထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသားတွေဆိုပြီး ဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို Facebook နဲ့ Twitter မှာ အကြိမ်ရေထောင်နဲ့ချီ ပြန်လည် မျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီပြောဆိုမှုဟာ နားလည်မှုလွဲစေနိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ မြင်ရတာဟာ ကင်ညာနိုင်ငံက စက်ရုံဝန်ထမ်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့အတူ ဓာတ်ပုံခုနစ်ပုံကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တုန်းက Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ထားတာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အကြိမ်ရေ ၂၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ screenshot
ပို့စ်မှာပါတဲ့စာသားတွေကတော့ အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသူများထောက်ခံတဲ့ NLD ကမ္ဘာ့ ခုံရုံးအမှုချေပချက်ကို icc မှာ သဘောကျလို့တဲ့” (မူရင်းအတိုင်း)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတုန်းက ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာ OIC အဖွဲ့ဝင် ၅၇ နိုင်ငံကိုယ်စား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (မူရင်းတင်သူရဲ့ caption မှာပါတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) ဆိုတာဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (ICJ) ကို ရည်ညွှန်းလိုဟန်ရှိပါတယ်။) စွဲဆိုတဲ့အမှုကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာမူစလင်တွေကို လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှာ ICJ ကို သွားပြီး စွပ်စွဲထားတဲ့အမှုကို ချေပခုခံခဲ့တာပါ။
ဓာတ်ပုံထဲမှာ NLD လိုဂိုပါတဲ့ တီရှပ်တွေဝတ်ဆင်ထားသူတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အလားတူဓာတ်ပုံတွေကို တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ် နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာလည်း တင်ထားပါတယ်။
အလားတူပုံရိပ်တွေပါဝင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုလည်း တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တုန်းက တင်ထားပါသေးတယ်။
ဗီဒီယိုမှာတွဲတင်ထားတဲ့စာသားတွေက အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ICJ မှာ မြနိမာနိုင်ငံကို တရားစွဲခဲ့သော ဂမ်ဘီယာ နိုင်ငံက NLD ကို ထောက်ခံနေတာပါ” (မူရင်းအတိုင်း)
အဲဒီဗီဒီယိုကို တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအဆိုဟာ နားလည်မှုလွဲမှားစေနိုင်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်မှာမြင်ရတာ ကင်ညာနိုင်ငံက စက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကျတဲ့စကားလုံး (Keywords) တွေသုံးပြီး ရှာကြည့်တဲ့အခါ Win Ko ဆိုတဲ့ Facebook သုံးစွဲသူတစ်ဦးကနေ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာတင်ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပုံတွေနဲ့အတူ တွဲတင်ထားတဲ့စာကတော့ “ကင်ညာမှNLDများနီတယ်နော်” ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် keyword သုံးပြီး ရှာကြည့်တဲ့အခါ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို Win Ko ရဲ့ Facebook account မှာပဲ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တုန်းက တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အောက်မှာ နားလည်မှုလွဲစေနိုင်တဲ့ပို့စ်တွေပါဗီဒီယို (ဘယ်) နဲ့ Win Ko ရဲ့ Facebook ပို့စ်ပါဗီဒီယို (ညာ) တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ screenshot ပုံရိပ်ခုနစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဗီဒီယိုကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တုန်းက ကင်ညာနိုင်ငံ၊ မွန်ဘာဆာမြို့မှာရှိတဲ့စက်ရုံမှာ ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ Win Ko Facebook account ပိုင်ရှင်က AFP ကို ပြောပါတယ်။
သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းက ကိုဝင်းနိုင် ဖြစ်ကြောင်း၊ Facebook ပို့စ်တွေမှာ ပါဝင်တာကတော့ ကင်ညာအခြေစိုက် Brilliant Garments Kenya Epz Limited မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူနဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဖြစ်ကြောင်း Win Ko Facebook account ပိုင်ရှင်က ဆိုပါတယ်။
“ကင်ညာနိုင်ငံ မွန်ဘဆာမြို့မှာပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရိုက်ခဲ့တာပါ။ အမေစုကို နဂိုကတည်းက ထောက်ခံလို့၊ သဘောကျလို့ ဝိုင်းပြီး လုပ်ပေးတာပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေက အမေစုကို သတင်းထဲကနေ နိုဘယ်လ်ဆုရှင်အဖြစ် သိကြတယ်။” ဆိုပြီး ကိုဝင်းနိုင် (Win Ko)က စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ Facebook Messenger ကနေ ဖုန်းလက်ခံ ဖြေကြားခဲ့တာပါ။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ လက်ရှိအာဏာရပါတီကို ထောက်ခံကြောင်း ပြသတဲ့အနေနဲ့ စက်ရုံက သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို NLD တီရှပ်တွေ ဝတ်ဆင်ခိုင်းခဲ့တာလို့ ကိုဝင်းနိုင်က ဆိုပါတယ်။
“သူတို့ အကုန်လုံး ကင်ညာနိုင်ငံသားတွေပါ။ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်မှ မပါပါဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒီလင့်ခ်ပါ Facebook ပို့စ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်ပါ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို Brilliant Garments Kenya Epz Limited ရဲ့ Facebook ပေ့ချ်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က ပြန်လည်မျှဝေထားတာတွေ့ရပြီး NLD တီရှပ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အလားတူစက်ရုံလုပ်သားတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
NLD ပါတီကတော့ ပြည်ပမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးတာမျိုးတွေ မလုပ်ထားဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာ အဲဒီလိုမဲဆွယ်စည်းရုံးတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ပါတီက ညွှန်ကြားထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ပါတီကို ထောက်ခံသူတွေက သူတို့ဟာသူတို့ ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်” ဆိုပြီး၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ NLD ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီဝင် ဦးကြည်တိုးက AFP ကို ဖုန်းကနေ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်တွေပျံ့နှံ့နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ ဒီပြောဆိုမှုတွေဟာ မမှန်ကန်ပါဘူးလို့ ဂမ်ဘီယာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး Ebrima Sillah က ဆိုပါတယ်။
မြန်မာအချက်အလက်စိစစ်ရေးဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Boom Myanmar မှာလည်း ဒီပို့စ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အချက်အလက်စိစစ်ထားတာကို ဒီလင့်ခ်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။